कस्तो खाना पोषणयुक्त ? हेर्नुस् पोषणविद् डा. उमा कोइरालाका ६ टिप्स | | Nepali Health
कस्तो खाना पोषणयुक्त ? हेर्नुस् पोषणविद् डा. उमा कोइरालाका ६ टिप्स
२०७२ चैत २७ गते १०:२७ मा प्रकाशित
हामी नेपालीहरु चिल्लो पिरो अमिलो र बोसोयुक्त खानेकुरा बढी मन पराउछौँ । तर तिनीहरुको मात्रा नमिलाई खाँदा शरीरलाई हानी हुन्छ ।यस्ता खानेकुरा सँगसँगै हरियो सागपात र ताजाफलफूल पनि सन्तुलितरुपमा खानुपर्छ । बढी चिल्लो अमिलो र पिरो खानेकुरा नखाँदा नै राम्रो हुन्छ । आफूले पचाउन सक्ने अवस्था हेरेर मात्र यस्तो परिकार खानुपर्छ ।
चिल्लो अमिलो पिरो खानेकुराले ग्यास्ट्रिक बढाउने, टन्सिल हुने लगायतका समस्या हुनसक्छ । त्यसमा कोलेस्टेरोल बढाउने र बोसोको मात्रा बढी हुन्छ । जसका कारण अपच हुने, कब्जियत हुने फुड प्वाइजनजस्ता समस्या देखा पर्छन् ।
प्राडा उमा कोइराला, पोषणविद्
प्रायः हाम्रो भान्सामा मसलेदार परिकारले प्राथमिकता पाउँछ । त्यस्ता परिकार बनाउँदा घरमै तयार गरिएको ताजा जिरा, धनियाँ, लसुन, प्याज लगायतका मसला प्रयोग गर्दा त्यति असर गर्दैन् । बजारमा पाइने रेडिमेड मसलाहरुको शुद्धतामा ग्यारेन्टी गर्न सकिदैन । तिनीहरुले शरीरमा मन्द बिषको काम गर्छन् । त्यसैले घरमै तयार गरेको मसला खानु राम्रो मानिन्छ ।
गर्मीयाम सुरु हुँदैछ । यो समयमा फुडप्वाइजनको सम्भावना पनि हुन्छ । फुडप्वाइजनको मुख्य कारण पनि दूषित पानी हो । त्यसैले पानी उमालेर मात्र पिउनुपर्छ । त्यसका साथै काँचोमासु तथा खानेकुराले पनि फुडप्वाइजन गराउन सक्छ ।
गर्मीको समयमा माछामासु खानृ मानिसले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सधै ताजामासु मात्र खानुपर्छ । बासी मासु खानै पर्ने अवस्था आयो भने अलिकति बढी तेल र मसला राखेर मासुमा भएको पानी सुकाउने गर्नुपर्छ र पातलो कपडाले छोपेर नगुम्सिने गरी सुरक्षीत साथ राखेर खानुपर्छ । तर फेरी भन्न चाहन्छु सबैभन्दा राम्रो बासी मासु नखानु नै राम्रो ।
उच्च प्रोटिनयुक्त खानाका कारण युरिक एसिडको समस्या बढ्दो
दर्जनबढी उपचारमा विपन्नलाई सुविधा, ८ लाख बढी मिर्गौलामा बाँकी सबमा १-१ लाख